इंग्ल्याण्ड ५५ वर्षपछि प्रमुख प्रतियोगिताको फाइनलमा – Nepal Press
इंग्ल्याण्ड ५५ वर्षपछि प्रमुख प्रतियोगिताको फाइनलमा
२०७८ असार २४ गते ७:०७
एजेन्सी । युरोपियन च्याम्पियनसिप २०२० को दोस्रो सेमिफाइनलमा डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा पराजित गरी इंग्ल्याण्डले इटलीसँगको फाइनल भेट निश्चित गरेको छ ।
घरेलु मैदान वेम्बलीमा कठिन प्रतिस्पर्धाबाट हासिल यो सफलताले इंग्ल्याण्डलाई ५५ वर्षपछि मुख्य फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुर्‍याएको छ । सन् १९६६ मा विश्वकप उपाधि जितेयता इंग्ल्याण्ड उपाधिविहीन छ भने युरोमा त पहिलोपल्ट फाइनलमा पुग्न सकेको हो ।
मिक्केल ड्याम्सगार्डले शानदार फ्रिकिकमार्फत ३० औं मिनेटमा डेनमार्कलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर ३९ औं मिनेटमा बुकायो साकाको प्रहार क्लियर गर्न लाग्दा डेनिस कप्तान सिमोक कजायरले आफ्नै पोष्टमा गोल गर्न पुगेपछि खेल बराबरीमा आयो ।
निर्धारित समयमा दुवैले १–१ को बराबरी खेलेपछि ३० मिनेटको अतिरिक्त समय थपिएको हो । १ सय ४ मिनेटमा इंग्ल्याण्डले पेनाल्टी पायो ।
ह्यारी केनको प्रहार डेनिस गोलरक्षक कास्पर स्माइकल्सले रोकेका थिए । तर रिवाउण्ड बलमा केनले नै गोल गर्न सफल रहे । यही गोलले इंग्ल्याण्डलाई युरो इतिहासमै पहिलोपल्ट फाइनलमा पुर्‍यायो ।
पहिलो खेलमै मुख्य खेलाडी क्रिष्टियन इरिक्सन हृदयघातबाट मैदानमै ढलेपछि धर्मराएको डेनमार्क सुरुआती दुई खेलमा पराजित रहे पनि समूह चरण पार गर्ने भाग्यमानी टोली बनेको थियो ।
सन् १९९२ को च्याम्पियन टोलीबमे यस संस्करणमा अप्रत्यासित प्रदर्शनको यात्रा सेमिफाइनलमा आएर टुंगिएको छ । सेमिफाइनलमा पराजित रहे पनि उनीहरु शीर ठाडो पार्न सक्नेछन् । डेनिस टोलीको आक्रामक क्षमता र गोलरक्षक स्माइकल्सको प्रदर्शनलाई विश्वभरका फुटबल समर्थकले प्रसंसा गरेका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ असार २४ गते ७:०७
युरो २०२०: टिम अफ दी टुर्नामेन्टमा इटालीको प्रभुत्व, रोनाल्डो र पोग्बा परेनन्
हामी इङ्ल्यान्डमाथि हाबी भयौं: मान्चिनी
२०१३ मै भएको थियो युरो २०२० को फाइनलमा इटालीसँग इङ्ल्यान्ड हार्ने भविष्यवाणी
इंग्ल्याण्डलाई हराएर ५३ वर्षपछि इटाली बन्यो युरोपियन च्याम्पियन
युरो २०२० फाइनल: इटालीविरुद्ध १९६६ विश्वकपको इतिहास दोहोर्‍याउला इङ्ल्यान्डले ?
रोनाल्डोले जित्छन् युरो २०२० को गोल्डेन बुट ? गोल बराबरी भए के हुन्छ ?
युरो २०२०: इटालीको फाइनल यात्राको एक झलक !
युरो २०२०: डेनमार्कविरुद्ध इङ्ल्यान्डले पाएको पेनाल्टी विवादित, मैदानमा दुई बल !
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आज सार्वजनिक गरिँदै